မြန်မာနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများက ဘယ်လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်မလဲ ?
MyJobs.com.mm သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ရန် အကောင်းဆုံး နေရာ ၁၀၀ ကိုရှာဖွေရန် အတွက် မြန်မာ့ အကောင်းဆုံးအလုပ်နေရာ ၁၀၀ စစ်တမ်းကို ဦးဆောင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်များ၏ယဉ်ကျေးမှု၊ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်တွင် ဝန်ထမ်းများမှ ကိုယ်တိုင် ထင်မြင်ချက် ရွေးချယ်နိုင်အောင် စစ်တမ်းကို ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ဤစစ်တမ်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သင်၏လက်ရှိအလုပ်ရှင်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်သူထဲမှ ကံထူးသူ တစ်ဦးကို Redmi Note9Pro ဖုန်းကို ကံထူးခွင့်ပေးထားပြီး ပါဝင်သူ ၂၀၀ ကျော်ကိုလည်း ဖုန်းငွေဖြည့် ကဒ်များ လက်ဆောင်ပြန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
“လစာကောင်းရတာထပ်အလုပ်တွင်စိတ်ကျေနပ်မှုရတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ MyJobs အနေဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကိုက်ညီသောအလုပ်အကိုင်ကောင်းများကိုရှာဖွေနိုင်ရုံသာမကမှန်ကန်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလမ်းကြောင်းသို့လျှောက်လှမ်းနိုင်အောင် အမြဲ ကြိုးစား ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့က အလုပ်တွေမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တိုးတက်မှု ရှိအောင် အားပေးမှု က အထူး အရေးပါပါတယ်။ ။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အလုပ်ရှာဖွေသူတစ် ဦး အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံးအလုပ်နေရာများ နှင့် အလုပ်တွေကို ရွေးချယ် ရှာဖွေနေပုံကို ပိုမို သိရှိ အောင် ယခုစစ်တမ်းကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ” ဟု MyJobs.com.mm ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Harry Antrakis ကပြောကြားသည်။
ယခု စစ်တမ်းသည်သင်၏လက်ရှိအလုပ်ရှင်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေး ထားပါသည်။ အလုပ်မှာ ပျော်နေလား?သင့်ရဲ့လစာအပြင်အခြားဘာအကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိပါသလဲ? လုပ်ငန်းခွင်မှာ သင့်အတွက် ကျန်းမာသောအလုပ် – ဘဝဟန်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါသလား ?
ဒါ့အပြင် Covid-19 ရောဂါကြောင့် သက်ရောက်မှုများကို အလုပ်ရှင်များမှ တုံ့ပြန်ပုံအပေါ် ဝန်ထမ်းများ၏အမြင်များကိုလည်း အခြေခံ မေးမြန်းထားပါသည်။ ဒီအချိန်ကာလအတွင်းသင့်ကိုအလုပ်ရှင်များက အကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ခံစားရသလား ? ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကသင့်ကိုရေရှည်မှာသူတို့နဲ့အတူနေဖို့စဉ်းစားနေသလား ?
အထက်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်အကိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အလုပ်ကျေနပ်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏အလုပ်ရှင်သည် သင့်အလုပ်တက်လမ်း အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လမ်းဖွင့်ပေးတယ်လို့ ခံစားရသလား?ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာသင်ဒါတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသလား? အလုပ်ပြောင်းခြင်းအကြောင်းပြောသောအခါအလုပ်ကြော်ငြာပေါ်တွင်“ လျှောက်ထား” ခလုတ်ကို နှိပ်ခါနီးတွင် သင် ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး လျှောက်ဖြစ်ပါသလဲ ?
ဒီ ၅ မိနစ်စစ်တမ်း မှာ သင့် ရဲ့အမြင်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ စစ်တမ်းမှာ ပါဝင်ရုံဖြင့် Redmi Note9Pro ဖုန်း သို့မဟုတ် ၅၀၀၀ ကျပ်တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် ကံထူးနိုင်တာကြောင့် ယခုပဲ စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်လိုက်ပါ။
MyJobs.com.mm သည်၂၀၁၂ခုနှစ်မှစ၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိထိပ်တန်းအလုပ်ရှင်များ နှင့် ရေရှည်လက်တွဲမှုများထူထောင်ကာ ကျွမ်းကျင်သောအလုပ်ရှာဖွေသူများ များ အကြား ကိုက်ညီ သော အလုပ်များ ရရှိစေရန် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်သည့်နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
စစ်တမ်းကို ဒီနေရာကနေဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ် >>> https://bit.ly/3mebrTZ